Hlola iMaldives - World Tourism Portal
Yini okufanele uyenze The Maldives.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeMaldives
Bukela ividiyo emayelana neMaldives
Hlola iMaldives isiqhingi se-coral 1,192 iziqhingi zamakhorali esiqoqeke ema-26 coral atoll (iziqhingi ezihlalwa nge200, kanye neziqhingi ze80 ezinezindawo zokuvakasha) olwandle i-Indian Ocean. Balala eningizimu-ntshonalanga yeNdiya futhi babhekwa njengengxenye yeSouthern Asia.
Maldives ingxenye enkulu engaziwa izivakashi kuze kube ngama-1970s akuqala. I-185 yeziqhingi nje iyikhaya lezakhamuzi zayo ze-300,000.
Owayekade eyiSultanate ngaphansi kokuvikelwa kwamaDashi kanye nabaseBrithani, amaMaldives manje asephambili.
I-Tsunami ye-26 ngo-December 2004 yabangela ukulimala okukhulu eMaldives - enesibalo se-290,000 kuphela, ngaphezu kwesithathu kwathinteka ngqo yi-tsunami futhi abantu abangaphezu kwe-15,000 basala bengenamakhaya.
Umkhakha wezokuvakasha uyimboni enkulu yezomnotho eMaldives, eheha izivakashi ezindaweni eziningi zokungcebeleka, izindawo ezibalekela kuzo, kanye neziqhingi ezizimele. AmaMaldives nawo anomlando ocebile ongawathola eziqhingini eziningi ezakhiwe, eveza umlando onemininingwane we-Maldives. Uma uhlela ukubona iMaldives ukubona, lezi yizindawo ze-20 zomlando kakhulu kumaMaldives ongazihambela.
AbaseMaldivi cishe bangamaSunni ngokuphelele, futhi isiko lendawo liyingxube yamathonya aseNingizimu Indian, amaSinhalese nama-Arabhu. Ngenkathi utshwala, ingulube, izidakamizwa kanye nokugcinwa komphakathi kwezinkolo ezingewona amaSulumane kuvinjelwe eziqhingini ezakhiwe, iziqhingi zokuphumula zivunyelwe ukuba khona ebhuthini lapho cishe noma ngabe yini iya khona.
Impelasonto eMaldives iqala ngoLwesihlanu kuya kuMgqibelo, lapho kuvalwa khona amabhange, amahhovisi kahulumeni nezitolo eziningi. Ngeke ukubone lokhu ezindaweni zokungcebeleka noma kunjalo, ngaphandle kokuthi amahora amahora adliwe angashintshwa ngemikhuleko yangoLwesihlanu.
AmaMaldives asezindaweni ezishisayo, anokukhanya okuningi kwelanga kanye namazinga okushisa azungeze i-30 ° C unyaka wonke.
Owesilisa - Idolobha elikhulu nedolobha elikhulu kunawo wonke
I-Addu City - Idolobha lesibili ngobukhulu futhi ikhaya elihlala isikhashana le-Suvadive secreeist ukunyakaza
Ukungenisa utshwala, ingulube noma izithombe zocansi (kuchazwa kabanzi) kumaMaldives akuvunyelwe futhi wonke umthwalo olayini we-X ufakwe lapho ufika. Endleleni ephumayo, qaphela ukuthi ukuthunyelwa kwesihlabathi, ama-olwandle noma amakhorali nakho kwenqatshelwe.
Cishe bonke abavakashi bafika eMalé International Airport, esesiQhingini saseHulhulé khona kanye nedolobha.
Isikhumulo sezindiza saseGan, emaphethelweni aseningizimu ye-Addu, futhi isebenza ngendiza eya eColombo
Ukuhamba uzungeze iMaldives kuthatha amafomu amathathu: izikebhe, izindiza zasolwandle (amatekisi omoya) namakhethini angasese. Izikebhe ziyilingana neMaldivian yemoto, kuyilapho izindiza nezikebhe ezizimele zigcinelwe izivakashi kuphela.
IsiNgisi sikhulunywa kabanzi, ikakhulukazi yizikhulu zikahulumeni nalabo abasebenza embonini yezokuvakasha. IsiNgisi lulimi lokufundisa ezikoleni, okusho ukuthi uzokwazi ukuxhumana nabantu bendawo ngamazinga ahlukahlukene obunzima.
Isibalo esikhulu sabasebenzi bendawo bayakwazi ukukhuluma kahle isiJalimane nesiNtaliyane. Lokhu kungahluka ngokuya ngezindawo zokungcebeleka ohlela ukuzivakashela, noma kunjalo.
Ngaphandle kokwenza itshe le-bungalow rock ku-honeymoon yakho, umsebenzi oyinhloko kumaMaldives yi-scuba diving. Ama-atoll wonke ayizimbotshana zamakhorali engamakhilomitha amaningi ukusuka kunoma iyiphi indawo enkulu, okusho ukuthi ukucaciswa kwamanzi kuhle kakhulu futhi nokuphila ngaphansi kwamanzi kuningi. Imisebe yama-Manta, oshaka, ngisho nokuphahlazeka okumbalwa, uyiqamba igama; ungayithola eMaldives.
I-Baa Atoll iyi-UNESCO Biosphere Reserve, lapho amanzi avikelwe khona anendawo ehlukahlukene yokuphila zasolwandle, kufaka phakathi ezinye izinhlobo ze-250 zamatshe omahosha athambile, ngaphezulu kwezinhlobo ze-1,000 zezinhlanzi zamadwala, kanye no-Hawksbill osengozini kanye nohlaza oluhlaza, oshaka.
Amanzi kuma-Maldives afudumele unyaka wonke futhi i-3mm Shorty noma i-Lycra diveskin iningi. Ukudonsa kungenzeka unyaka wonke, kepha imvula, umoya namagagasi kuvame kakhulu phakathi nenkathi yonyaka oseningizimu-ntshonalanga (Juni-Agasti). Isikhathi esihle sokudonswa kwe-scuba sisuka kuJanuwari kuya ku-Ephreli, lapho ulwandle luzolile, ilanga likhanya futhi ukubonakala kungafinyelela ku-30m. Amakamelo we-decompression angatholakala kumaBandos eKaafu (15min from Male), Kuredu eLhaviyani Atoll naseKuramathi e-Alifu.
Ngenkathi ukudonsela phansi kuhamba kahle kakhulu ngamazinga omhlaba ngisho nasendaweni eseduze Male, ukubonakala kanye nethuba lokuhlangana nama-pelagics amakhulu kukhuphuka njengoba ubhekisa kuma-atoll angaphandle. Ama-Currents ahlukahluka kakhulu, ngokuvamisile okuncane ngaphakathi kwama-atoll kodwa kukhona imisakazo enamandla ezinhlangothini ezibheke olwandle oluvulekile. Izindinganiso zokuphepha zivame ukuphakama kakhulu, ngamagiya agcinwe kahle nokunamathela ngokuqinile kuphrothokholi (isheke lokuhlola, ukujula okuphezulu, ukusetshenziswa kwamakhompiyutha, njll.).
Izindawo ezinhle kakhulu ze-dive eMaldives.
IHanifaru Bay, iBawa Atoll ingesinye sezindawo zasolwandle ezaziwa kakhulu ngeMaldives, iHanifaru Bay idume umhlaba wonke ngokugcina imibuthano enkulu kakhulu yezikhathi zonyaka yama-manta rays. Kukholelwa futhi ukuthi ukuphela kwendawo emhlabeni ukubona ukudla kwabo okuyisimangaliso; ngesikhathi semonons yasentshonalanga (kusukela ngoMeyi kuze kube nguNovemba), amapayipi amaningi ageza kuleli chibi elifana nethangi, ahehe imisebe yama-200 manta kanye noshaka ababamba ongezansi ekuphakamiseni ukudla kwabo bonke.
I-Blue Hole, i-Baa Atoll iyisitshalo samakhorali ngaphansi komfula esidonsa ngamamitha we-22 kuya kumamitha ayisikhombisa sinikeza okuhlangenwe nakho okumangazayo kwabaphambukeli nabaningi ngokufanayo, abangase babone impilo yasolwandle enkulukazi kubandakanya izimfudu zaseHawksbill, i-triggerfish futhi mhlawumbe noshaka ohlala eGuitar.
Kubantu abangazi ukuthi bangene kanjani kwi-SCUBA dive, bangaqala ukufunda ukuntywila ngokufundisa oqeqeshiwe, baye ekuhlwanyeleni noma bajabulele eminye imidlalo yasemanzini.
Iziqhingi ezinhle kakhulu ze-snorkeling
Ama-snorkelers ahlala efuna iziqhingi ezihamba phambili kumaMaldives anogwadule olukhulu lwendlu ukuze akwazi ukuchitha isikhathi esiningi njengoba efuna ukuzulazula esiqhingini, ahlola impilo yasolwandle eningi. Nazi iziqhingi ezinhle kakhulu ze-snorkeling kumaMaldives:
Isiqhingi saseMaalhosmadulu, i-Amilla Beach Villa Residences, Baa Atoll UNESCO Biosphere Reserve
I-Bandos Island, i-bandos, i-North Male Atoll
IBaros Island, iBaros, iNyakatho Male Atoll
I-Fihalholi, i-Fihalholi Island Resort, I-South Male Atoll
IBiyadhoo, iBiyadhoo Island Resort, I-South Male Atoll
IMandhoo, iMirihi Island Resort, eSouth Ari Atoll
IMachchafushi, iCentara Grand Island, iNingizimu Ari Atoll
IMaldives iya ngokuya ngokuya ngokuthandwa kwamagagasi lapho uya khona. Amanzi we-Turquoise kanye namagagasi amahle kwenza kube yindawo ekahle futhi engagcwele maningi yabaphangi abafuna izimo zokushwabana okubushelelezi.
Isikhathi esingcono kakhulu sokushweza kumaMaldives siphakathi kukaMashi no-Okthoba; amagagasi amakhulu kakhulu aqala ngoJuni, Julayi noJulayi. Leli paradesi livezwa ukugcwala okufanayo ne-Indonesia, ngaphandle kokuthi ukuphakama kwayo okuphezulu nokuvezwa kwayo eSouth-East kunikeza ukubanda okuphezulu nokupholisa okuncane. Umncintiswano wakamuva we-O'Neil Deep Blue Contitions obanjelwe eMaldives ubeke iMaldives ngokuqinile kumephu yomhlaba we-surf. Ngenkathi amakhefu amaningi okwaziwa ngama-surf ese-Male 'Atoll, ngokuqinisekile kusenokuningi okungatholakala. AmaSouth Central atoll uLaamu kanye noHuvadhoo adalulwa kakhulu ukuthi akhuphuke esuka e-Antarctic futhi uyindawo yokuqala yokumisa amandla ayo emaphethelweni eningizimu naseningizimu / ntshonalanga yale ma-atoll. Iningi lemininingwane yokushiswa kwamagagasi ligxile kubesilisa nasezindaweni zokungcebeleka ezungeze iMadoda, okuthi ngokudabukisayo eminyakeni edlule kube nokugcwala kwabantu ngezikebhe zokuvakasha kanye nabavakashi abanolaka bonke abalwela amaza. Ama-atoll aseningizimu asekhona impela ngokuphumula kwesigaba somhlaba… .ezinye izindawo eziyimfihlo ezingatholakala.
Izinkampani ezikhethekile zihlela uhambo lwesikebhe olunezinsuku eziningi esifundeni, zivumele ama-surfers ukuhamba kalula ukusuka kwelinye iphuzu kuya kwelinye futhi andise isikhathi sokusebenzisa.
Kusukela umthetho we-2010 Maldivian ushintshile, ukuvumela Abavakashi ukuba baye eholidini eziqhingini zasendaweni, kude nezindawo zokuvakasha nezikebhe. Lawa mahhotela ezindawo zokudlela zasendaweni anikela ngamanani anengqondo kubahambi abangama-surf, abafisa ukuhlala emhlabeni futhi bathola amaMaldives angempela.
Kodwa-ke, ngokomthetho kubekwa izinsizakalo zamanani ngamadola aseMelika (i-USD) futhi zidinga ukukhokhelwa ngohlobo olunamandla (noma ikhadi lesikweletu), ngakho-ke asikho isidingo sokushintsha imali uma uzosebenzisa sonke isikhathi sakho ezindaweni zokungcebeleka. Amahhotela amaningi anesitolo kodwa lokhu kukhawulelwe kuma-diving kanye nasebaluleke kakhulu ngamaholide (ukhilimu welanga, ama-sarong, amakhamera alahlwayo, njll.) Ukuvakasha okuvela ezindaweni zokuvakasha kuzokuyisa eziqhingini zasendaweni lapho kunezinto zohlobo lwezandla okufanele zithengiwe, kepha ngokuvamile zenziwa ngaphandle kwaseMaldives futhi kuthengiswe ngemabula ekuhlaselayo.
Uma ubhekisa amabombo e-Male noma kwamanye ama-atoll, ukushintshaniswa kwe-rufiyaa kuzokusiza. Izinhlamvu zemali, ikakhulukazi, ziyathandeka futhi zenza isikhumbuzo esithandekayo ngokwazo, kepha amahlelo amancane awavamile ukusetshenziswa noma ukubonwa.
Izilwanyane ziyabiza kulabo abanethembiso lokuvakasha kanye nezinsizakalo. Izindawo zokungcebeleka zinamandla amakhulu ezinsizakalweni zezivakashi zazo futhi zikhokhiswa ngokufanele: kumahhotela asemaphakathi naphakathi, i-USD1000 ngesonto umbhangqwana ngamunye isabelomali esihlanganayo sokudla, iziphuzo nokuvakasha, ngaphezulu nangaphandle kwezindleko zezindiza nendawo yokuhlala. Cishe noma yini - kufaka phakathi amakamelo amahhotela uma ebhukhelwe endaweni yakini - kubhaxabulwa nge-10% "service charity", kodwa amathiphu kulindeleke ngaphezulu. Inkokhelo yenkonzo, ngomthetho, ihlukaniswe phakathi kwabasebenzi ezinyangeni ezedlule, yingakho-ke uhlelo lokuhlanganyela lwabasebenzi inzuzo.
Ngasikhathi sinye, kumhambi onesikhathi, iMaldives ingaba okuhlangenwe nakho okungabizi futhi okunomvuzo, ngamanani aqhathaniswa I-Caribbean (Cuba eceleni), kepha inani elimpofu kakhulu uma liqhathaniswa namanye amazwe aseNingizimu neNingizimu ne-Eshiya, uma inhloso yomuntu siqu kungukuvakasha kwezokuvakasha. Kubantu abagxile ekusampuleni impilo yendawo kanye nokuma kude nesixuku sabavakashi, amanani entengo acishe afane Malaysia.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuhlala eziqhingini ezakhiwe kwakusho ukuhlonipha izinkambiso zamaSulumane eziqinile (akukho utshwala, ukugqoka okunesizotha, nokuziphatha okugciniwe). Ngasikhathi sinye, abantu bendawo bamukeleka kakhulu futhi isipiliyoni singase sijule kakhulu futhi sizuzise ngokwengeziwe kunokuhlala ezindaweni zokungcebeleka, ngokuya ngomqondo womuntu.
Zonke izindawo zokungcebeleka zizisebenzele ngokwazo ngakho-ke okungenani zinendawo yokudlela eyodwa, esebenza ngohlobo lokudla okulindelwe izivakashi zabo. Ukudla kwasekuseni cishe kufakiwe njalo, futhi izindawo eziningi zokungcebeleka zinikeza inketho yehhafu-ibhodi, okusho ukuthi uthola ukudla okudla kwakusihlwa, nebhodi eligcwele, okusho ukuthi uthola isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa. Lokhu kungakhawulela umonakalo uma kuqhathaniswa noku-oda i-la carte, kepha izinketho zakho ngokuvamile zilinganiselwe kakhulu futhi iziphuzo azivame ukumbozwa, hhayi ngisho namanzi. Uma uhlela ukuphuza kakhulu, kungakufanelekela ukukubandakanya konke, kepha lokhu kuvimbela wena iziphuzo zasendlini.
Owesilisa unendawo yokudlela ethokozisayo, okuhloswe kuyo izivakashi kanye nabantu abaphezulu abanemali iMaldivian. Ngaphandle kobudoda obukhulu izinketho zinqunyelwe, ezineziqhingi ezinabantu abaningi ezine-zero noma i-cafe eyodwa (ebizwa ngokuthi i-hotaa) ethengisa ukudla kwasendaweni kwaseMaldivian ngamanani aphansi njengeMVR20 ngokudla okuphelele.
Ukudla okujwayelekile kwaseMaldivian: ama-masroshi e-pastry, ama-mas riha fish curry, i-papadhu, inhlanzi eyosiwe, ilayisi kanye netiyi elimnyama elimnandi.
Ukudla kwaseMaldivian kugxile kakhulu ezinhlanzini (mas), ikakhulukazi kuma-tuna (kandu mas), futhi kuvela kakhulu esiko laseSri Lankan naseningizimu yeNdiya, ikakhulukazi iKerala. Izitsha zivame ukuvutha, zinephunga futhi zinambitheke ngokhukhamba, kepha sebenzisa imifino embalwa kakhulu. Ukudla kwendabuko kuqukethe irayisi, umhluzi wezinhlanzi ocacile obizwa nge-garudhiya nezitsha eziseceleni zikalamula, upelepele no-anyanisi. Ama-curries aziwa njenge-riha ayathandwa futhi irayisi livame ukuhlanganiswa ne-roshi, isinkwa esingenamvubelo esifana ne-roti yaseNdiya, ne-papadhu, uhlobo lweMaldivian lwe-crispy Indian poppadums. Ezinye izitsha ezijwayelekile zifaka:
i-mas huni - inhlanzi ebunjiwe ebhemayo ngamakhukhunathi egayiwe kanye no-anyanisi, isidlo sasekuseni esivame kakhulu saseMaldivian
fihunu mas - inhlanzi eyosiwe isongwe ngo-chili
bambukeylu hiti - isinkwa esinezithelo
Ukudla okulula okubizwa ngokuthi i-hedhikaa, cishe okuhlala kuhlaselwe inhlanzi futhi kuthosiwe ngokujulile, kungatholakala kunoma iyiphi indawo yokudlela yaseMaldivian.
bajiya - khekhe ligcwele izinhlanzi, ukhukhunathi no-anyanisi
gulha - amabhola e-khekhe agcwele izinhlanzi ezibhemayo
i-keemia - imiqobelo yezinhlanzi ejulile-ethosiwe
kulhi borkibaa - ikhekhe lezinzipho
masroshi - mas huni esongelwe isinkwa roshi futhi wabhaka
theluli mas - inhlanzi ethosiwe nopelepele kanye negalikhi
Ngokomthetho, uma uyi-18 futhi ungeyena umSulumane, ungathenga futhi uphuze utshwala. Kodwa-ke njengoba iMaldives iyisizwe samaSulumane, utshwala buvinjelwe ngempumelelo kubantu bendawo.
Kodwa-ke, cishe zonke izindawo zokungcebeleka nezizonke eziphila phakathi kwezikebhe zinamalayisense okusebenzisa utshwala, imvamisa ngensimbi eshisayo. Imvume yotshwala obuthunyelwe ngaphandle obekuvumela ukuvumela abathengisayo ukuthi bazithengele utshwala ukuze busebenzise bususiwe. Indawo okuwukuphela kwayo eduzane neMadoda, ngaphandle kwezindawo zokuphumula, lapho abantu bengaphuza khona utshwala iseHulhule Island Hotel, eyaziwa njengeHIH noma nehhotela lesikhumulo sezindiza.
Thepha amanzi ezindaweni zokungcebeleka kungenzeka noma angaphuzi - hlola ngabaphathi. Amanzi asemabhodleleni ezindaweni zokungcebeleka athengwa ngamanani amakhulu. Amanzi asemabhodleleni eMilisa noma esiqhingini ashibhile. Kungahle kube ngumqondo omuhle ukuletha amabhodlela ambalwa we-5 litre kusuka ku-Male uye endaweni yakho yokuphumula uma unenketho.
Ubugebengu buqabukela. Ngokuvamile, abantu baseMaldivi ngabantu abathembekile, abasizayo nabamukelayo. Azikho izidakamizwa noma kuphi ezindaweni zokungcebeleka kodwa abantu abaningi baseMaldivi bathola kalula izidakamizwa, kubikwa ukuthi i-50% yesizukulwane esisha ngabantu abasebenzisa izidakamizwa; kunenkinga yezidakamizwa ekhulayo kubantu bendawo yingakho ubugebengu obuncane bokuyisekela buqhamukile. Thatha izinyathelo zokuvikela okujwayelekile njengokuthi ungashiyi imali nezinto ezibalulekile zilele nxazonke, futhi usebenzise amabhokisi wediphozi aphephile egumbini.
Azikho izinkinga ezinkulu ngezifo kuMaldives. Qaphela ukuthi amanzi ompompi angeke aphuzwe kuzo zonke izindawo zokungcebeleka: buza endaweni yakho. AmaMaldives awanawo umalaleveva, kepha ezinye iziqhingi zinomiyane futhi ukubamba umkhuhlane we-dengue kuzo kungenzeka, yize kungenzeka kakhulu. Kulabo abaqhamuka ezifundeni ezinegciwane lomkhuhlane ophuzi, kuyadingeka isitifiketi sokungena kwamanye amazwe.
Iningi lezinkinga livela ekulimaleni noma ekulimaleni okuhlobene nelanga. Ukushiswa yilanga kuhlale kubangela izinkinga ezindaweni ezishisayo, kepha izithandani ezisebenzisa amahora amaningi ngasikhathi sinye esikebheni zigqoke i-wetsuit kanye nokushisa ngokweqile kwefomu elithile noma kwenye. Ukugcina lokhu engqondweni, ukulimala okunjalo kuzogwemeka kalula inqobo nje uma uphuza amanzi amaningi futhi ungene emthunzini ngangokunokwenzeka.
Izindawo eziningi zokungcebeleka zinodokotela wazo noma umhlengikazi futhi iningi lazo zitholakala kalula emakamelweni okuwohloka. Owesilisa unesibhedlela esisebenza kahle nesimanje kodwa khumbula ukuthi kusekude ukuba aphunyulwe.